बैशाख २५ पछि १४ जिल्लामा लकडाउन लम्बिने, अन्यमा आशिंक खुल्ने ! | सुदुरपश्चिम खबर
बैशाख २५ पछि १४ जिल्लामा लकडाउन लम्बिने, अन्यमा आशिंक खुल्ने !
काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण देखिएका १४ जिल्लामा थप १५ दिनसम्म लकडाउन लम्ब्याउने र अन्य जिल्लामा आंशिक खोल्ने गरी आन्तरिक छलफल अगाडि बढाएको छ ।
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमा सुरक्षा निकायले पेस गरेको रणनीतिक राय–सुझावमा यस्तो प्रस्ताव समेटिएको छ ।
लकडाउन जारी राख्ने कि आंशिक खोल्ने भन्ने विषयमा सुरक्षा निकायले तयार पारी समिति र गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा संक्रमण जोखिमका आधारमा उच्च जोखिम क्षेत्रलाई रातो, आंशिक जोखिम क्षेत्रलाई पहेंलो र न्यून जोखिम क्षेत्रलाई हरियो गरी तीन क्षेत्रमा ७७ जिल्लालाई छुट्याइएको छ ।
गृह स्रोतबाट प्राप्त उक्त प्रतिवेदन सुझावमा २९ जिल्लालाई रातो, २८ जिल्लालाई पहेंलो र २० जिल्लालाई हरियो क्षेत्रमा छुट्याइएको छ ।
जसमा प्रदेश १ का आठ र प्रदेश २ का सबै आठ जिल्लालाई रातो अर्थात् उच्च जोखिममा राखिएको छ ।
रातो क्षेत्रमा परेका २९ जिल्लामध्ये हाल संक्रमण पुष्टि भएका बागलुङ, बाँके, भोजपुर, चितवन, धनुषा, झापा, कैलाली, काठमाडौं, कञ्चनपुर, पर्सा, रौतहट, रूपन्देही, उदयपुर र बारा जिल्ला छन् ।
यस्तो प्रस्तावबारे छलफल भइरहे पनि यो नै अन्तिम नभएको गृह स्रोतले जनायो । ‘यही मोडालिटीलाई टेकेर थप छलफल गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो ।
उक्त अध्ययनमा रातो क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाभित्र रहेका मुख्य संक्रमित स्थानलाई हट स्पट तोकेर पूर्ण लकडाउन पालना गर्ने र त्यस्ता हट स्पटलाई पूर्ण रूपमा सिलबन्दी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
गृह स्रोतका अनुसार भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्ला र तीसँग निकट रहेका क्षेत्रमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ ।
साथै गत डिसेम्बरपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरू धेरै भएका जिल्लाको पनि पहिचान गरी ती जिल्लामाथि थप निगरानी गर्नुपर्ने कुरा सरकारी तहमा भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २० गतेसम्म देशैभरि २४ हजार ९ सय ७ जना क्वारेन्टाइनमा छन्, जसमध्ये ९४ जना आइसोलेसनमा छन् ।
मन्त्रालय स्रोतले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैको पीसीआर विधिबाट परीक्षण नगरी घर पठाउँदा जोखिम बढ्ने भएकाले यसको सुनिश्चिततापछि मात्रै लकडाउनको मोडलबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।
लकडाउन कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा सरकारी संयन्त्र छलफलमा जुटे पनि त्यसको अन्तिम मोडल कस्तो हुने भन्ने निष्कर्ष निस्किसकेको छैन ।
उच्चस्तरीय समितिले सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैसँग सम्भावित प्रस्तावहरू मागेर अन्तिम टुंगोमा पुग्ने गरी काम अगाडि बढाइरहेको छ ।
समितिमा प्रस्तुत गरिएको पछिल्लो प्रस्तावमा भने अहिलेकै जस्तो लकडाउन जारी राखे सर्वसाधारणको जीवनयापन थप कष्टकर बन्ने, अर्थतन्त्र खस्कने र खाद्य संकट हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका अत्यधिक नेपाली फिर्ता भई रोजगारीको समस्या हुन सक्ने र लकडाउन बढ्दै जाँदा नैराश्य पैदा भई आन्दोलन वा विरोधका गतिविधिसम्म हुन सक्ने आकलन पनि सुरक्षा निकायले गरेको छ ।
तर लकडाउन धेरै नै खुकुलो हुँदा संक्रमणको विस्तार हुन सक्ने खतरा भएकाले लकडाउन क्रमशस् खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय समितिले सरकारी निकायहरूबाट पाएको छ ।
गृह स्रोतका अनुसार सुरक्षा निकायले पछिल्ला दिनमा लकडाउन अवज्ञा गर्ने क्रम बढ्दै गएको रिपोर्ट दिएका छन् । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार, निम्न आय भएका डेरावालहरू आफ्नो थातथलो फर्किने क्रम बढ्दै गएको छ ।
जस्तो कि, वैशाख ११ गते नागढुंगा नाका हँुदै १ सय ९६ गाडी र भक्तपुरको साँगा हुँदै ६ सय ७७ गाडी बाहिरिएका थिए । त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् वैशाख १४ मा नागढुंगा हुँदै ७ सय ४० र साँगा हुँदै ६ सय ५५ गाडी बाहिरिएका थिए ।
गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहको सिफारिसमा गाडी चलाउने काम बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको पूर्ण पालना भएको देखिन्न ।
गृहलाई प्राप्त सुरक्षा रिपोर्टमा पछिल्ला दिन देशैभरि लकडाउन उल्लंघन गर्ने गतिविधिहरू पनि बढ्दै गएको उल्लेख छ ।
प्राप्त सरकारी सूचनाअनुसार लकडाउन सुरु भएपछिका ३६ औं दिनसम्म १ लाख ८ हजार ८ सय ३० जनालाई र ४७ हजार ६ सय ५१ सवारीलाई प्रहरीले लकडाउन उल्लंघन गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अर्थात् दैनिक तीन हजारभन्दा धेरैलाई प्रहरीले लकडाउन उल्लंघनका कारण नियन्त्रणमा लिएको छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार लकडाउन उल्लंघन गर्नेमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका छन् ।
गृहले चार चरणमा लकडाउन खोल्न सकिने मोडालिटी बनाएर त्यसमाथि विभिन्न सरकारी निकायबाट राय लिइरहेको बुझिन्छ ।
कुनै संक्रमित नरहेको र नयाँ संक्रमित पनि नभेटिएको ठाउँलाई सामान्य तह, ज्यादै न्यून संक्रमण भएको र नयाँ संक्रमित नभेटिएको ठाउँलाई न्यून जोखिम अवस्था भएको तह, केही संक्रमित पुष्टि भएको र नयाँ संक्रमित नभेटिएको स्थानलाई मध्यम जोखिम अवस्था भएको तह र धेरै संक्रमित पुष्टि भएका साथै नयाँ संक्रमित भेटिने क्रम जारी रहेको स्थानलाई उच्च जोखिमको अवस्था गरेर वर्गीकरण गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ ।
सरकारले लकडाउन कस्तो बनाउने भन्नेबारे सुरु गरेको छलफलमा तीन विकल्प पनि आएका छन् । पहिलो, जारी लकडाउनलाई थप दुई सातासम्म निरन्तरता दिने ।
दोस्रो, निश्चित समयका लागि आंशिक बन्देज लगाई मुख्य क्रियाकलाप खुला राख्ने । तेस्रो, सुरक्षा सावधानी अपनाएर लकडाउन नगर्ने ।
गृहका एक उच्च अधिकारीले दोस्रो विकल्पलाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढेको तर त्यसको स्वरूप कस्तो हुनेबारे भन्ने यकिन भइनसकेको बताए ।
पछिल्लो छलफलमा लकडाउनका विभिन्न मोडलहरूबारे सरकारी अधिकारीहरूले अध्ययन गर्ने र त्यसलाई पछ्याउन सकिने कि नसकिने भन्नेबारे छलफल केन्द्रित गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार चीनको वुहानमा गरेजस्तो ७६ दिने लकडाउनको मोडलदेखि दक्षिण अफ्रिका, भारत, जर्मनी, जर्जियाले अपनाएको लकडाउन मोडलबारेसमेत छलफल भएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन सक्ने कामदारको संख्या आकलन गरी सुरक्षित आगमन सुनिश्चित गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
तर कुन देशबाट कति कामदार आउँछन् र तिनका लागि कति क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ भन्नेमा निष्कर्ष निस्किसकेको देखिन्न ।
खाडी र मलेसियामा मात्रै १५ लाखभन्दा धेरै कामदार रहे पनि तिनीहरूमध्ये कति कामविहीन भए र कति तत्कालै घर फर्किन चाहिरहेका छन् भन्नेबारे सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन ।
कुवेत, बहराइन र साउदी अरबमा सयौंको संख्यामा नेपाली कामदार संक्रमित भइसकेको देखिन्छ ।
उच्चस्तरीय समितिका अनुसार हरियो क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरूमा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिए पनि रातो र पहेंलो क्षेत्रमा तत्कालै पठनपाठन सुचारु गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
समितिमा प्रविधि प्रयोग गरेर पठनपाठन जारी राख्ने कि शैक्षिक वर्षको क्यालेन्डर नै फेरबदल गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार आगामी असारसम्म पठनपाठन सुरु गर्ने परिस्थिति अहिलेको अवस्थामा नदेखिएकाले त्यतिबेलासम्मका लागि पर्ख र हेरकै अवस्थामा बस्नु उपयुक्त हुने समितिको बुझाइ छ ।
कोभिड–१९ पूर्ण रूपमा रोकथाम नभएसम्मका लागि मनोरञ्जन क्षेत्र र भीडभाड हुने धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र, सिनेमा घर र रेस्टुरेन्ट पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव समितिले पाएको छ ।
त्यस्तै खेलकुद गतिविधि पूर्ण रूपमा स्थगित गर्ने र चाडपर्व, भोजभतेर र सभा सम्मेलन पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सुझाइएको छ ।
अब लकडाउन थप्दा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य इलाका पहिचान गरी अति जोखिम, जोखिम र सामान्य क्षेत्र घोषणा गरेर आंशिक खोल्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
२५ गतेपछि दुईरदुई साताको जोखिमको समीक्षा गरी परिस्थिति आकलन गर्दै लकडाउन आंशिक वा पूर्ण लागू गर्ने भन्ने निर्णय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समितिको बुझाइ छ ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयले आंशिक लकडाउनमा जाँदा उपत्यकाका तीन जिल्लामा मानवीय गतिविधिलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे समितिलाई आफ्नो राय दिइसकेको छ ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले उपत्यकामा प्रहरीको दरबन्दी ११ हजार रहे पनि ट्राफिकसहित ९ हजारको हाराहारीमा मात्रै प्रहरी कार्यरत छन् । जसमध्ये विमानस्थल, भीआईपीको सुरक्षामा परिचालित हुनुपर्नेबाहेक करिब ६ हजारजति मात्रै परिचालन हुन सक्ने देखिन्छ ।
कान्तिपुरले गरेको कुराकानीमा कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेका केही पूर्वअधिकारीले उपत्यकाको अस्तव्यस्त सहरी संरचना र ट्राफिक व्यवस्थापन सम्हाल्न गाह्रो हुने अनुभवका आधारमा आंशिक लकडाउनलाई नियमन गर्न प्रहरीलाई गाह्रो हुने बताए ।
उच्चस्तरीय समितिमा खाद्यान्न र अत्यावश्यकीय सामग्रीका पसल खोल्न दिने कि भन्ने कुरा भए पनि सुरक्षा अधिकारीहरूले त्यसको मापदण्ड कायम गर्ने आधार निर्माण गर्नै जटिल हुने बताए ।
एक उच्च प्रहरी अधिकारीले काठमाडौंमा धेरैजसो पसल सबै खिच्रीमिच्री सामानका बिक्रेता भएकाले पनि कुनलाई खोल्न दिने, कुनलाई नदिने भन्नेमा प्रस्टता नभएर द्वन्द्व बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
दैनिक सचांर बाट सभार